Bit By Bit - Sava lalana - 1.1 An ranomainty tsiny
Tamin'ny fahavaratry ny taona 2009, dia naneno ny finday manerana an'i Rwanda rehetra. Ankoatra ny amin'ny antso an-tapitrisany maro eo amin'ny fianakaviana, namana, mpiara-miasa sy ny raharaham-barotra, tokony ho 1000 Rwandais nandray antso avy Josoa sy ny mpiara-miasa aminy Blumenstock. Ny mpikaroka dia nianatra harena sy ny fahantrana amin'ny alalan'ny nitarika ny fanadihadiana ny olona izay efa tsapaka sampled avy amin'ny base de données ny 1,5 tapitrisa mpanjifa avy any Rwanda finday lehibe indrindra mpamatsy. Blumenstock sy ny mpiara-miasa nanontany ny mpandray anjara raha toa ka te-handray anjara amin'ny fanadihadiana, nanazava ny toetry ny fikarohana azy ireo, ary avy eo dia nangataka ny andiam-panontaniana mikasika ny isan'ny mponina, ara-tsosialy, sy ny toe-karena toetra.
Zavatra rehetra izay nolazaiko hatramin'izao mahatonga izany feo toy ny nentim-paharazana siansa ara-tsosialy fanadihadiana. Saingy, inona avy manaraka dia tsy nentin-drazana, fara fahakeliny, tsy mbola. Izy ireo dia nampiasa ny valin'ny fandinihana natao mba hampiofanana ny milina modely fianarana ny olona mialoha ny harena amin'ny antso tahirin-kevitra, ary dia nampiasa io modely ho Tombanan'ny ny harena rehetra 1,5 tapitrisa mpanjifa. Manaraka, dia tombanana ny toeram-ponenana rehetra 1,5 tapitrisa ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fampiasana vaovao ara-jeografia nandinika lalina ny antso hazo. Mametraka ireo vinavina roa niara-ny Tombanana harena sy ny toerana tombanana-ponenana-Blumenstock sy mpiara-miasa aminy dia afaka hamokatra avo-vahaolana vinavina ny toerana fizarana ny harena manerana an'i Rwanda. Indrindra indrindra, dia afaka mamokatra ho tombanana harena ho an'ny tsirairay ny 2.148 Rwanda sela, ny kely indrindra vondrona fitantanan-draharaha ao amin'ny firenena.
Sarotra ny kery vinavina ireo, satria tsy nisy mihitsy ny toy izany namoaka ny vinavinan'ny faritra ara-jeografia kely any Rwanda. Fa, raha Blumenstock sy ny mpiara-miasa aggregated ny vinavina ho Rwanda ny 30 distrika, dia nahita fa ny vinavina dia toy izany koa ny vinavina avy amin'ny mponina ankapobeny sy ny fahasalamana Survey, ny volamena ny fanadihadiana tamin'ny fari-dalam-pandrosoana. Na dia ireo fomba roa mitovy namoaka ny vinavinan'ny amin'ity tranga ity, efa akaiky ny Blumenstock sy ny mpiara-miasa dia tokony ho 10 heny haingana kokoa sy mora vidy kokoa in-50 noho ny nentim-paharazana sy ny Health Surveys mponina ankapobeny. Ireo haingana kokoa sy ambany be vola lany mamorona vaovao vinavina fahafaha ho an'ny mpikaroka, dia fitondrana, sy ny orinasa (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) .
Ankoatra ny fampivelarana ny fomba fiasa vaovao, izany fianarana tsara fanahy avy tahaka ny Rorschach inkblot fitsapana; inona no olona nahita dia miankina amin'ny ny mombamomba. Maro ny mpahay siansa ara-tsosialy mahita vaovao fitaovana fandrefesana izay azo ampiasaina mba hizaha toetra teoria momba ny fampandrosoana ara-toekarena. Maro ny tahirin-kevitra ny mpahay siansa mahita mangatsiaka milina vaovao fianarana olana. Maro ny raharaham-barotra ny olona mahita ny fomba mahery vaika ho an'ny mamoha sarobidy eo nomerika soritry tahirin-kevitra fa izy ireo no efa nanangona. Maro ny mpiaro ny fiainana manokana mahita mampatahotra fampahatsiahivana fa miaina ao anatin'ny fotoana fanarahamaso faobe. Maro ny mpanao politika mahita ny fomba izay afaka manampy ny teknolojia vaovao mamorona tontolo iray tsara kokoa. Raha ny marina, izany no fianarana ireo zavatra rehetra, ary izany no antony izany dia varavarankely ho any ny hoavin'ny fiaraha-monina fikarohana.